रुकुम हत्याकाण्ड : आफ्ना मतदाताको विभत्स हत्या हुँदा किन चुप छन शक्ति बस्नेत ? — Motivatenews.Com
रुकुम हत्याकाण्ड : आफ्ना मतदाताको विभत्स हत्या हुँदा किन चुप छन शक्ति बस्नेत ?
काठमाडौं – १० बर्षे जनयुद्धमा जातिय भेदभावलाई अन्त्य गर्दै, सबै मानवजाती समान हो भनेर जनचेतना फैलाउँदै हिडेका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत आफ्ना मतदातामाथि भएको विभत्स हत्याको बारेमा अहिलेसम्म चुप लागेर बसेका छन ? उनलाई नै भोट दिएर मन्त्री बनाउने दलितहरुको हत्या हुँदा चुपचाप बस्नुले उनीमाथि शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ ।
जाजरकोट जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले आफ्ना मतादाताका लागि एक शब्दसमेत खर्च नगर्नु आश्चर्यको कुरा हो । मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमासमेत मन्त्री बस्नेतको आलोचना भएको थियो । उनीमाथि घटनालाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप छ ।
उनले यो विषयमा चुप लागेर कतै घटनालाई तोडमोड गरेर अपराधिलाई छुट दिन खोजिएका त छैनन् भनेर शका गर्ने ठाउँ दिएका छन । शनिबार बेलुका भएको उक्र घटनामा उनकै मतददाता जाजरकोटको भेरी नगरपालिका– ४, रानागाउँनिवासी २१ वर्षीय नवराज विक प्रेमिकालाई भगाउँन प्रेमिकाको घर जाँदा गाउँलेहरुबाट उनीसहित ६ जनाको विभत्स हत्या भएको छ । स्थानीयले दलितको छोराले ठकुरीको छोरी भगाउन लागेको भन्दै संगठित आक्रमण गरेर हत्या गरेको घटनामा संलग्न केटा पक्षका युवाहरुले आरोप लगाएका छन ।
घरेलु हतियारसहित जम्मा भएका गाऊँलेहरुले नवराजसहितका युवाहरुको हत्या गरेर नदिमा फालेको गम्भीर आरोप लाग्दा पनि चुप बस्नु जाजरकोटी जनताको अपमान हो । देशवासीहरु उक्त घटनामा केन्द्रीत भएर चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेको वेलामा जाजरकोटका जनप्रतिनिधि चुप लाग्नु आफ्ना मतदाता प्रति गरेको नजरअन्दाज हो । कि दलित भएरै गरिको भेदभाव हो ?
आफ्ना मतदातामाथि विभत्सपूर्ण हत्या हुँदा चुपबस्नु अपराधलाई ढाकछोप गरेको ठहरिन्छ । जातिय उत्पिडनको अन्यका लागि १० बर्षे जनयुद्धमा होमिएका बस्नेतले दलितमाथि भएको अन्यायको विरोधमा एक शब्द खर्च नगर्नु नवसामान्तबादको उपज हो । उनलाई जाजरकोटी जनताले शंकाको नजरले हेर्न थालेका छन । मतदान गरेकोमा पछुत्तो मानिरहेका छन ।
पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका बस्नेतले घटनाको सत्यतथ्य छनविनका लागि पहल कदमी लिन पर्ने ठाउँमा चुप बस्नुले उनको राजनीतिक भविश्यमाथि शंकट पैदा हुने होकी भनेर उनी निकटका नेताहरु निन्तित हुन थालेका छन ।
एक जाजरकोटका स्थानियले मोटिभेट सँग भने, ‘यति ठूलो विषयलाई हल्का रुपमा लिएर फेसबुकमा स्टाटस लेखिरहेका छन । यो मजा होइन । संसदमा विषय उठाउन पर्यो र संसदिय छानविन समिति बनाएर निश्पक्ष छानविको लागि पहल कदमी लिन पर्यो ।’